Mmadụ abụọ nwụrụ, mmadụ abụọ merụrụ ahụ na Arizona Amtrak agbapụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Mmadụ abụọ nwụrụ, mmadụ abụọ merụrụ ahụ na Arizona Amtrak agbapụ
Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị otu ndị ọrụ na -ahụ maka ọgwụ ọjọọ mpaghara yana ndị ọchịchị ime obodo na nke gọọmentị etiti, na -eme nlele oge niile na ụgbọ oloko kwụ ọtọ mgbe agbapụ ahụ mere.
Ndị ọrụ mmanye iwu na -eme nlegharị anya ụgbọ oloko Amtrak mgbe agbapụ mere.
Otu onye ọrụ mmanye iwu na onye a na -enyo enyo na ọ bụ onye na -agba ụta nwụrụ na égbè ahụ n'ọdụ ụgbọ oloko Tucson.
Achọpụtaghị ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ n'etiti ndị njem ụgbọ oloko 137 na ndị ọrụ ụgbọ oloko 11.
Mgbapụ dị n'ime ụgbọ okporo ígwè Amtrak kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Arizona mere ka ndị mmadụ nwụọ na mmadụ abụọ merụrụ ahụ.
Ndị ọrụ mmanye dị ala banyere ụgbọ okporo ígwè Amtrak nke na-aga New Orleans si Los Angeles kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ elu dị n'ime ime obodo Tucson iji mee nyocha oge niile maka egbe egbe, ọgwụ ọjọọ na ego.
Ndị ọrụ mmanye iwu zutere mmadụ abụọ na ọkwa nke abụọ nke ụgbọ oloko nwere okpukpu abụọ ma na-achọ ijide otu n'ime ha, mgbe onye a na-enyo enyo wepụtara egbe wee mepee ọkụ.
Egburu otu onye na -ahụ maka nchịkwa ọgwụ ọjọọ (DEA) na mgbọ ahụ, onye ọrụ ọzọ merụrụ ahụ ma nọ n'ọnọdụ dị oke egwu. Otu onye uwe ojii Tucson nke gbatara ọsọ enyemaka mgbe ọ nụsịrị mgbọ egbe merụrụ ahụ, mana ọ nọ n'ọnọdụ kwụsiri ike.
Mgbe ya na ndị uwe ojii gbanyere mgbọ, onye na -agba égbè gbabara n'ime ime ụlọ ịwụ ụgbọ oloko. N'ikpeazụ, ndị ọrụ mmanye iwu kpebiri na onye a na -enyo enyo n'ime ụlọ ịsa ahụ anwụọla n'ezie. O dochaghị anya ugbu a ma ndị nnọchi anya a gbara ya ma ọ bụ gbuo onwe ya.
Achọpụtaghị mmerụ ahụ n'etiti ndị njem 137 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri 11 nọ n'ụgbọ ahụ Amtrak ụgbọ oloko ndị a kpọpụrụ n'ọdụ ụgbọ ahụ.
Onye a na -enyo enyo mbụ ejidere ka nọ n'ụlọ mkpọrọ ndị uwe ojii. Ndị ọrụ mmanye iwu amabeghị onye ọ bụla na -enyo enyo.